खा'ली पेटमा म'ह मिसाएर दै'निक एक पोटी लसु'न खानुहो'स्, हुनेछन् यी १० फा'इदा - HPsanchar.com
October 14, 2020 biplov adhikari खानपान 0
म’ह एन्टी बा’योटिक र एन्टी ब्याक्टेरिय’ल हुन्छ भने ल’सुनमा एलिसिन र फाइबरजस्ता फाइदाजनक न्यूट्रियन्ट्स हुने गर्दछ । यी दुबै मिसाएर खाँदा तपाईंको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रो’गबाट छुटकारा दिनेछ । यी दुबै मिसाएर खानुका १० फा’इदाः
तौ’ल घट्नुः शरिर र लसुनको मिश्रणले शरिरको बो’सोलाई कम गर्दछ । यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । मु’टुको स’मस्याः यसले कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ र र’क्त संचारलाई सन्तुलनमा राख्दछ । बलियो दाँतः यसमा पाइने फस्फरसले दाँ’त बलियो बनाउँछ । यसले गमको समस्याबाट पनि जोगाउँछ । क्या’न्सरः लसुन र महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्या’न्सर हुनबाट जोगाउ’न सहयोग गर्दछ ।
सं’क्रमणः यसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । त्यसकारण फं’गल इन्फेक्सन हटाउन यो फाइदाजनक हुन्छ । रु’घा खोकीः यो खाँदा शरिरमा गर्मी बढ्छ । त्यसकारण चिसो महिनामा रुघा खो’कीबाट टाढा राख्छ । प्र’तिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्दछः लसुन र महले रो’ग प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । यसले शरिरको सं’क्रमणबाट बचाउँछ । म’धुमेहः यसले र’गतमा सुगरको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्दछ । यसकारण यो म’धुमेहका लागि फाइदाजनक हुन्छ । र’क्तचापः यसमा एलिसिन हुन्छ जसले र’क्तचापलाई साधारण राख्दछ । यसले शरिरमा बोसोलाई कम गर्नमा फाइदाजनक हुन्छ । बाँ’झोपनः यसमा सेलेनियम हुन्छ जसले बाँझोपनलाई हटाउन सहयोग गर्दछ ।
न’फ्याँक्नुस् चौला’नी, छन् य’स्ता अद्भु’त लाभ ! चौ’लानीलाई मानिसहरू बेका’र कुरा ठाने’र फ्याँकिदिन्छन् तर स्वा’स्थ्यका लागि यो रा’मवाण हो। चौलानीमा सबै आवश्यक पोषक तत्त्वहरू भरपूर हुन्छन् । यसको से’वनले तौल घटाउन सहयोग गर्छ अनि र’क्तचाप पनि नियन्त्रणमा राख्छ । यहाँ हामी चौलानीका केही फाइदाका बारेमा कुरा गर्नेछौं ।
तौल घटाउँछ: चौलानी पिउँदा मेटाबोलिज’म बढ्छ । यसमा फाइबर भरपूर हुनाले भो’क पनि नियन्त्रणमा रहन्छ जसले गर्दा तौल घटाउन सहज हुन्छ । पाचन प्रक्रियामा सुधार: दिनदिनै चौलानी पिउँदा पे’टका असल ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् । तिनले पाचन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँछन् । अझ चौलानीमा कागतीपानी मिसाउँदा क’ब्जियतको समस्या भाग्छ। ऊर्जा बढाउँछ: चामलमा कार्बोहाइड्रेड भरपूर हुनाले चौलानी पिउँदा शरीरमा दिनभरि ऊर्जा रहन्छ। बिहान एक गिलास चौलानी अवश्य पिउनुस् । त्यसमा अलिकति मह राखेर पिउँदा झनै राम्रो ।
ज्व’रो भगाउँछ: भाइरल इन्फेक्सन वा ज्वरो आउँदा एक गिलास चौलानीमा मरिच राखेर पिउनुस् । छिटो ठीक हुनुहुनेछ । श’रीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन: चौलानीले शरीरलाई सबै आवश्यक पोषक पदार्थ दिन्छ र पानीको कमी पनि हुन दिँदैन । त्यसमा दूधको तर मिसाएर खाए हुन्छ । र’क्तचाप नियन्त्रण: उक्त र’क्तचापको समस्या छ भने दिनदिनै एक गिलास चौलानी पिउनुस् । त्यसमा भएको सोडियम भएकाले उच्च र’क्तचाप र हाइपरटेन्सनमा फाइदा गर्छ ।
हा’ड बलियो: आधा गिलास चौलानी र आधा गिलास दूध मिसाएर पिउँदा हाड बलियो हुन्छ। यसरी पिइरहँदा बुढेसकालमा जो’र्नी दुख्ने समस्या हुँदैन । चम्किलो छाला: दिनदिनै चौलानी पिउँदा छाला चम्किलो हुन्छ । चौलानीले अनुहार धोए पनि हुन्छ । यसले पिम्पल, चाउरी र आँखामुनि कालो जस्ता समस्या पनि भगाउँछ । कपाल झर्न रोक्छ: चौलानी पिउँदा वा त्यसले कपाल नुहाउँदा कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । यसले तालुलाई सबै पोषक तत्त्व दिलाउने हुँदा कपालको जरा बलियो हुन्छ ।
प्रे’सर लो भ’यो ? अपनाउनु’स् यी घरे’लु उ’पाय ! र’क्तचाप अचानक न्यून भएमा यसले श’रीरका विभिन्न अंगमा हानि पुर्‍याउन सक्छ। प्रे’सर लो भएको महसुस भएमा के गर्ने ? अपनाउनुस् यी उपायः नु’नपानी खाने: नुनमा सोडियम पाइन्छ, जसले ब्ल’ड प्रे’सर बढाउन मद्दत गर्छ। प्रे’सर लो भएमा एक ग्लास पानीमा डेढ चम्चा नुन हालेर पिउनुपर्छ। कफी: ब्ल’ड प्रे’सर कम भएमा स्ट्रोङ कफी, हट चकलेट, कोकाकोला अथवा क्या’फिनयुक्त खाद्य पदार्थ खानाले प्रेसर सन्तुलनमा आउँछ। यदि सधैं प्रे’सर लो भइरहन्छ भने हरेक बिहान एक कप कफी खाने गर्नुपर्छ । तर, कफीसँगै केही खानेकुरा खान भुल्नु हुँदैन ।
किसमिस: प्रे’सर लो भएमा किसमिस खानु पनि लाभदायक हुन्छ । प्रे’सर लो भइरहन्छ भने राति केही किसमिस भिजाएर भोलिपल्ट बिहान भिजेको किसमिस र त्यसको पानी खाने गर्नुपर्छ। तुलसी: तुलसीमा भिटामिन-सी, पोटासियम, म्याग्नेसियमजस्ता तत्व पाइन्छन्। प्रेसर लो भएमा १०-१५ वटा तुलसीका पत्ता जुसमा हालेर त्यसमा एक चम्चा मह हाली पिउने गर्नुपर्छ। कागती पानी: कागती पानीले उच्च र न्यून र’क्तचाप दुवैमा लाभ गर्छ । प्रेसर लो भएमा कागती पानीमा अलिकति नुन र चिनी हालेर पिउनुपर्छ ।
अब नि’न्द्रा नला’गे, यस्ता घ’रेलु उपा’य अ’पनाउनुहोस् ! पुग्छ , त्यस्ता व्यक्तीको अनुहारमा समेत चमक आउने चि’कित्सकको भनाई छ । तर हरेक मानिसको जिवन सोचे जस्तो हुँदैन । चाहेर पनि मस्त निदाउन सक्दैनन् । लामो समय सम्म ओछ्यानमा पल्टिदानी निन्द्रा पर्दैन । यसरी लामो समय सम्म निन्द्रा नलागेमा हाम्रो शरीरको कि’ड्नी र मु’टुमा सोझै असर गर्छं । तनाव बढ्ने , टाउको दुख्ने डि’प्रेसनको समस्या आउछ । ब’ल्ड प्रेसर बढ्छ । मोटोपन बढ्छ । सु’गर बड्छ । जसको लागी हामीले दैनिक ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । यदि निन्द्रा लाग्ने औषधी सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसले हाम्रो शरीरको कि’ड्रनीमा असर गर्छ । यस्तो समस्याबाट मुक्त पाउन यस्ता घरेलु विधि अपानाउन सकिन्छ । यसो गर्दा निनभए डाक्टरको सल्लाह पनि लिनुपर्छ ।
१. प्रसस्त समय घाम ताप्नुहोस् जसले थकान महसुस गराउछ र राती निन्द्रा लाग्दछ, साथै घामबाट प्रसस्त मात्रामा भिटामिन डि पाइन्छ । २. दैनिक व्यायम गर्ने , हिडडुल गर्ने । चाडै सुत्ने र चाडै उढ्ने बानी बसाल्ने । ३. बेलुका ४ बजे पछि चिया ,कफी एनर्जी ड्रिक तथा पिय पर्दाथ खान छोड्नुहोस् । यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याफिन पाइन्छ । एक सय ग्राम कोफिनमा ४० मिलि ग्राम क्याफिन पाइन्छ । त्यसले निन्द्रा भगाउने काम गर्दछ । ४. खाना खाने वित्तिकै सुत्ने बानी छ भने यसलाई छोड्नुहोस् , जसले शरीरलाई नकारात्मक असर गर्दछ । खाना खाएको कम्तीमा २ घण्टा पछि सुत्ने वानी बसाल्नुहोस् ।
५. राती चाडै ओछ्यानमा जाने बानी बसाल्नुहोस् जसले निन्द्रा लाग्न मद्धत गर्छ । ६. सुत्ने समय एउटै बनाउनुहोस् । जसले गर्दा हाम्रो मष्तिस्कलाई सुत्ने र उढ्ने समय थाहा पाउछ । ७. बेलुकी सधैं मुख धुने , दाँत माज्ने बानी बसाल्ने , सुत्दा सधैं आफुलाई उपयोगी किताब पढ्ने बानी बसाल्ने । ८. आफु सुत्ने ओछ्रयान सधैं सफा चिटिक्क पारे राख्ने बानी बसाल्नुहोस् । ९.सुत्ने बेलामा मष्तिस्कलाई कुनै पनि तनाव नदिने , सुत्ने बेलामा कहिल्यै मसलेदार खाना खानु हुँदैन । मसलेदार खानाले शरीरलाई हिट दिन्छ र पाचन तन्त्र पनि रात भरी सक्रिय गराइदिन्छ । १०.सुत्नु भन्दा १ घण्टा अगाडी दुधमा अलिकती जाइफलको धुलो हालेर खानुहोस् । यसको अलवा दालचिनीको धुलो राखेर दुधमा खादा नि गहिरो निन्द्रा लाग्दछ । २० ग्राम जाइफल प्रयोग गरियो भने यसले ३६ घण्टा सम्म निन्द्रा लाग्छ । पाचन किड््रनीको लागी राम्रो गर्छ ।
११. सुत्ने बेलामा केरा खाने गर्नुहोस् । केरामा पोटासियम , म्याग्नेसियम , भिटामिन बी ‘6’ पाइने गर्छ ।१२. पुदिनाको अचार, चिया खाने । १३.सेतो चना खाने , यसमा पोटासियम पाइन्छ ।१४.हरियो सागसब्जी खाने, चिल्लो रहित दही खाने । १५ सुत्ने बेलामा किबी फल, बदान ५-६ खाने । १६.मह खाने यसले मष्तिस्कमा रहेको सेरेटोनिकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्दछ । १७ सुने बेलामा सधै. शरीरलाई राम्ररी मालिस गर्नै बानि बसाल्नुहोस् । तर सबैलाई ८ घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन ,कोही ५ घण्टा सुतेर नि स्र्फुत हुन सक्छन् । यदि कसैलाई डि’पे्रसन छ भने डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको औषधि सेवन गर्नुपर्दछ ।
दु’बाेकाे यस्ताे फा’इदा दि’नमा कति पट’क र कसरी खा’ने ! दुबो हामी सबैको लागी परिचित झार हो । यसलाई नदेख्ने सायदै कोही होलान । यो हाम्रो घर वरिपरिको आगनमा उम्रिरहेको हुन्छ । हिन्दु धर्ममा यसलाई विभिन्न पाठपुजा गर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यसको महत्व छुट्टै छ । यसलाई आयुर्वेदमा औषधी बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । दुबो हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । यसको महत्वको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा नभएकाले यसलाई हामी एउटा घाँसको रुपमा मात्र लिने गर्छौं । यदि हामीलाई यसको उपयोगको बारेमा थाहा हुने हो भने यो हाम्रा लागी विभिन्न रो’गको औष’धि हुन्छ ।
दुबोले स्वा’स्थ्यमा पुर्याउने फाइदाहरु यस्ता छन्: १) दुबोको रसमा पोषक तत्व हुने भएकाले यो स्वा’स्थ्यका लागि त्यसैपनि फाइदाजक छ । २) क’ब्जियत, क’लेजोको रोग, यौ’नरो’गमा दुबो अत्यान्तै लाभदायक हुनछ । ३) श’रीरको विकार हटाउँछ । ४) यसले र’गतलाई शुद्धिकरण गर्न सघाउँछ । ५) पि’साबमा खराबी छ भने दुबोको रस फाइदाजनक हुन्छ । ६) ना’कको समस्या पनि दुबो लाभदायक हुन्छ । ७) सामान्य अवस्था वान्ता भए, नाथ्री फुटे, छाती पोले, जिउ चिलाए, शरीरको कुनै भाग सुन्निएमा दुबोको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
शरीरमा आवश्यक प्रोटिनको मात्रा पुगे/नपुगेको यसरी थाहा पाउनुहोस्, जानी राखौँ: प्रोटिन शरीरलाई नभई नहुने पोषक तत्व हो । अङ्ग, मां’सपेशी, स्नायु प्रणाली तथा प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै हदसम्म प्रोटिनमा भर पर्छन् । मांसपेशीको विकास तथा आन्तरिक स्व’स्थताले शरीरको ढाँचा तयार पार्छ र यो सब प्रोटिनमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले अत्यावश्यक प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु जरुरी छ । प्रोटिनको अभावमा तपाइकाे शारीरिक विकास राम्रोसँग हुँदैन । प्रोटिन अभाव भएको सङ्केत थाहा पाउन सके त्यसको समाधानको उपाय अपनाउन सकिन्छ । प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु: शरीरलाई स्व’स्थ राख्न फ्याट, सो’डियम, पो’टासियम, का’र्बोहाड्रेट, सुगर, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन र प्रोटिनको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ । यी सबैको सन्तुलनले नै शरीरलाई स्वस्थ राख्दछ । यी सबैमध्ये हड्डी, मां’सपेशी र मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि प्रोटिन अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो । हरेक पोषक तत्त्वझैं शरीरलाई प्रोटिनको पनि निश्चित मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर, प्रोटिन धेरै हुनु अथवा कम हुनु दुवै स्वा’स्थ्यको लागि हानिकारक छ ।विशेषगरी यसको कमीले मानिसको शरीर कमजोर हुनुका साथै अन्य समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । यो पर्याप्त मात्रामा नहुनाले मां’सपेशी र हड्डीका साथै मु’टुसम्बन्धी अुनेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसको कमीले शरीरमा यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् :
तौल अचानक कम हुँदै जानुस्: सामान्यतया मानिसको तौल घटबढ भइरहन्छ । तर, यदि शरीरमा प्रोटिनको मात्रा कम छ भने शरीरलाई आवश्यक प्रोटिन यसले मांसपेशीलाई टुक्राएर मांसपेशीबाट लिन थाल्छ र अचानक तौलमा तीव्र गतिमा कमी आउँछ । हे’मोग्लोबिनको कमी: हेमोग्लोबिन अर्थात् सेतो र’क्तकोषिका प्रोटिनबाट नै बन्ने भएकाले शरीरमा प्रोटिनको कमी भएमा हेमोग्लोबिनमा कमी आउँछ र यसले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउँछ । कपाल कमजोर हुनु: तौल कम हुनुका साथै प्रोटिनको कमीले कपाल पनि कमजोर हुँदै जान्छ । कपाल पलाउन पनि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनको कमीले कपाल कमजोर हुने, कपालमा हाँगा पलाउने, झर्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छ । त्यस्तै, नङ कमजोर हुनुले पनि शरीरमा प्रोटिनको कमी भएको सङ्केत गर्छ । श’रीरमा एडेमा(पानी फोका) हुनु: प्रोटिनको कमीले एडेमा अर्थात् शरीरको केही भागमा पानी फोका देखिन सक्छ । प्रोटिनले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित राख्ने भएकाले यसको कमी भएमा शरीरमा पानीको मात्रा असन्तुलित हुन गई यस्ता समस्या देखा पर्छन् । विशेषतः हातपाउमा यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
अन्य समस्या: छाला फुस्रो हुनु अथवा छालामा धर्सा देखिनु पनि प्रोटिनको कमीका कारण हुन सक्छ । शरीर कमजोर भएको महसूस हुनु, निद्रा धेरै लाग्नु, घाउ लागेको छ भने ठीक हुन धेरै समय लाग्नु बारम्बार भोक लाग्नु, मांसपेशी र जोर्नी दुखिरहनु, शरीरमा ऊर्जाको कमी हुनु, टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु, थकानको महसूस हुनु आदि प्रोटिनको कमीले हुने समस्याहरू हुन् ।
अहिले यस्ता समस्या अधिकांश व्यक्तिमा देखिने गरेको छ । प्रोटिनको कमीले सामान्यदेखि गम्भीर समस्या पनि देखा पर्न सक्छ । सन्तुलित आहारको कमी, प्रोटिनको स्रोत राम्ररी थाहा नहुनु, नियमित एकै प्रकारको आहार गर्नु आदि कारणले शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन गई माथि उल्लिखित समस्याहरू शरीरमा देखिन सक्छन् । त्यसैले शरीरमा प्रोटिनको मात्रालाई सन्तुलित राखिराख्नु आवश्यक छ । कतिपय मानिस प्रोटिनको आवश्यकता खेलाडी र बडीबिल्डरलाई मात्र हुन्छ भन्ने सोच्छन् । यो अत्यन्त गलत हो । हरेक व्यक्तिलाई प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ ।
प्रोटिन माछा, मासु र अण्डामा प्रशस्त मात्रामा पाइने भएकाले ननभेज खानेलाई यसको समस्या कम भए पनि शाकाहारी मानिसलाई भने माछामासुबाहेक प्रोटिन पाइने आहारको जानकारी कम हुने गरेकाले प्रोटिनको कमीले यस्तो समस्या धेरै देखिने गरेको छ । दूध, चिज, पनिर, टोफु, नौनी, गेडागुडी, दाल, सोयाबिन, फर्सी–काँक्रो आदिको बियाँ, गहुँको रोटी, पालुङ्गोको साग, जौको रोटी र चिउरा आदि प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने शाकाहारी आहार हुन् ।
प्रोटिनको कमी हुँदा के हुन्छ ? पातलो रौँ – शरीरको रौँ’को मोटाई वंशाणुगत हुने भए पनि प्रोटिनको अभावमा रौँ पातलो हुन्छ । शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन जाँदा शरीरले रक्षात्मक उपाय अपनाएर रौँ, नङलाई प्रोटिन आपूर्ति गर्न छाड्छ । यसैकारणले नङ र रौँको स्वास्थ्य बिग्रन्छ । यसैले रौँ र नङको स्वा’स्थ्य अवस्थाले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा दर्साउँछ । आँखा सुन्निने: प्रोटिनको अभाव भएको अवस्थामा र’गतमा प्लाज्मा प्रोटिन कमी हुन्छ । क’लेजोले पर्याप्त मात्रामा फलाम तत्व सञ्चय गर्न नसक्दा यसरी प्लाज्मा प्रोटिन कम हुने हो । फलाम तत्वको कमी भएर हेमोग्लोबिनको उत्पादन घट्छ र रक्तअल्पता भएर आँखा सुन्निन्छ । थकान: प्रोटिन कम हुँदा शरीर थकित हुन्छ किनभने शरीरले पर्याप्त ऊर्जा पाउँदैन । शरीरमा चिनीको मात्रा प्रोटिनको सहयोगमा व्यवस्थित हुन्छ । यसैले प्रोटिनको पर्याप्त मात्रा भएन भने दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र थकान महसुस हुन्छ । मांसपेशी क्षय हुनुले प्रोटिनको कमी देखाउँछ । प्रोटिनको अभाव भएमा मांसपेशीको आकार कम हुन थाल्छ ।
भोक लाग्नु प्रोटिनको आभावमा भोक धेरै लाग्छ । विसन्चो हुनु: स्वस्थ मानिसमा पनि प्रोटिनको आभाव भएको अवस्थामा बारम्बार बिरामी पर्न थाल्छ । शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन आवश्यक पर्छ । रातो र’क्तकोष, सोतो रक्तकोष र एन्टिबडीको आधार प्रोटिन हो । यी सबै पक्षले मिलेर शरीरमा रोगाणु नाश गर्ने काम गर्छन् । झाडापखाला: झाडापखाला लाग्नु भनेको पाचन प्रणाली बिग्रनु हो । यस अवस्थामा आन्द्राले पोषक तत्व राम्रोसँग अवशोषित गर्न सकेको हुँदैन र शरीरमा प्रोटिनको कमी हुनजान्छ ।
सं’सारको सबै तरका’री मध्ये सबै भन्दा धेरै शरीरलाई फाइ’दा गर्ने तरकारी : स्कुस